उबुन्टु सर्भर १.18.04.०XNUMX LTS न्यूनतम, आधारभूत स्थापना | Ubunlog
उबुन्टु सर्भर १.18.04.०XNUMX LTS न्यूनतम, आधारभूत स्थापना
डेमेन ए | | ट्यूटोरियलहरू, Ubuntu
अर्को लेखमा हामी न्यूनतम Ubuntu १.18.04.०XNUMX LTS सर्भर कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे एक नजर राख्नेछौं, धेरै स्क्रीनशटको साथ। यी लाइनहरूको उद्देश्य देखाउनु हो उबुन्टु १.18.04.०XNUMX एलटीएसको आधारभूत स्थापना, अरू केहि हैन। हामी यसलाई यो सर्भरमा बनाउन सकिने कन्फिगरेसनहरू कार्यान्वयन गर्न आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं, र हामी भर्चुअलबक्स मेशिनमा प्रयोग गर्न लाग्यौं।
यो लेखका लागि हामी अपरेटिंग सिस्टमको LTS शाखा प्रयोग गर्ने छौं। हामी years बर्षको लागि उबन्टु अपडेटहरू प्राप्त गर्नेछौं र सर्भरहरूमा प्रयोगको लागि सिफारिस गरिन्छ। मैले भनेझैं हामीले स्थापना हेर्ने छौं अर्कोमा VirtualBox। म भर्चुअल मेसिनको सिर्जना छोड्ने छु र हामी मात्र अपरेटिंग सिस्टमको स्थापना देख्दछौं।
उबुन्टु सर्वर स्थापना गर्न, हामीले निम्न कभर गर्नुपर्नेछ अघिल्लो आवश्यकताहरु:
La उबंटु १.18.04.०XNUMX सर्वरको आईएसओ छविउपलब्ध छ यहाँ (-64-बिट इंटेल र AMD CPU का लागि)। अन्य उबुन्टु डाउनलोडहरूका लागि तपाइँ निम्न सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ लिङ्क.
यो सिफारिस गरिएको छ एक छिटो इन्टर्नेट जडान प्याकेज अपडेटहरू स्थापनाको क्रममा उबुन्टु सर्भरबाट डाउनलोड गरिएका छन्।
1 उबुन्टु सर्भर १.18.04.०XNUMX LTS बेस प्रणाली
1.1 भाषा चयन
1.2.1 किबोर्ड कन्फिगरेसन
1.3 होस्ट नाम
1.5 पासवर्ड छान्नुहोस्
1.6 घडी सेट गर्नुहोस्
1.8 HTTP प्रोक्सी
1.9 सुरक्षा अपडेटहरू
1.10 कार्यक्रम छनौट
1.11 GRUB स्थापना गर्नुहोस्
2 पहिलो लगईन
उबुन्टु सर्भर १.18.04.०XNUMX LTS बेस प्रणाली
आईएसओ छवि सम्मिलित गर्नुहोस् तपाइँको कम्प्युटरमा उबन्टु स्थापना गर्न र त्यहाँबाट बुट गर्न। जब म यहाँ गर्नेछु भर्चुअल मेशिनमा अपरेटिंग प्रणाली स्थापना गर्दा, तपाईं डाउनलोड गरिएको आईएसओ फाईल स्रोतको रूपमा चयन गर्न सक्नुहुनेछ VMWare र Virtualbox मा CD / DVD ड्राइभबाट पहिले यसलाई CD न जलाएमा।
पहिलो स्क्रिनले भाषा चयनकर्ता प्रदर्शन गर्दछ। तपाईंको चयन गर्नुहोस् स्थापना प्रक्रियाको लागि भाषा.
त्यसपछि विकल्प छनौट गर्नुहोस् उबुन्टु सर्वर स्थापना गर्नुहोस्.
तपाइँको भाषा फेरि चयन गर्नुहोस्, यस पटक भाषा उबुन्टु अपरेटिंग प्रणालीको लागि हो:
अब तपाईको स्थान छनौट गर्नुहोस्। स्थान सेटिंग्स तपाईको सर्वर कीबोर्ड सेटिंग्स, लोकेल, र समय क्षेत्र को लागी महत्वपूर्ण छ।
किबोर्ड लेआउट छनौट गर्नुहोस्। हामीसंग विकल्प छ उबुन्टु स्थापनाकर्तालाई किबोर्ड सेटिंग्स स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउन अनुमति दिनुहोस् चयन गर्दैहो'। यदि हामी सूचीबाट सहि किबोर्ड चयन गर्न चाहान्छौं भने हामीले छनौट गर्नै पर्छ 'होइन'।
नेटवर्क DHCP संग कन्फिगर हुनेछ यदि नेटवर्कमा DHCP सर्भर छ।
अर्को स्क्रिनमा प्रणालीको होस्टनाम प्रविष्ट गर्नुहोस्। यस उदाहरणमा, मेरो सर्भर भनिन्छ entreunosyceros- सर्वर.
Ubuntu मूल प्रयोगकर्ताको रूपमा सीधा लगइनलाई अनुमति दिदैन। तसर्थ, हामीले पहिलो सत्रको सुरूवातका लागि नयाँ प्रणाली प्रयोगकर्ता सिर्जना गर्नुपर्नेछ। म नाम sapoclay को साथ एक प्रयोगकर्ता बनाउनेछु (Gnu / Linux मा व्यवस्थापक आरक्षित नाम हो).
घडी सेट गर्नुहोस्
यदि जाँच गर्नुहोस् स्थापनाकर्ताले तपाइँको समय क्षेत्र पत्ता लगायो सहि यदि हो भने, 'हो' चयन गर्नुहोस्, अन्यथा, 'होईन' मा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई म्यानुअली चयन गर्नुहोस्।
अब हामीले हार्ड ड्राइभको विभाजन गर्नुपर्नेछ। सरलता खोज्दै हामी चयन गर्दछौं निर्देशित - पूर्ण डिस्क प्रयोग गर्नुहोस् र LVM कन्फिगर गर्नुहोस् - यसले भोल्युम समूह सिर्जना गर्दछ। यी दुई तार्किक भोल्यूमहरू हुन्, एउटा / फाईल प्रणालीका लागि र एउटा स्वपका लागि (यसको वितरण प्रत्येक मा निर्भर गर्दछ)। यदि तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले के गरिरहनु भएको छ भने, तपाईं स्वचालित रूपमा विभाजनहरू पनि कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ।
अहिले हामी डिस्क चयन गर्दछौं जुन हामी विभाजन गर्न चाहन्छौं:
जब हामीलाई डिस्कमा परिवर्तनहरू बचत गर्न र LVM कन्फिगर गर्न सोधिन्छ?, हामी छान्नेछौं 'हो'।
यदि तपाईंले छान्नु भएको छ भने गाईडेड मोड, सम्पूर्ण डिस्क प्रयोग गर्नुहोस् र LVM कन्फिगर गर्नुहोस्। अब हामी डिस्क स्पेसको मात्रा निर्दिष्ट गर्न सक्दछौं जुन तार्किक भोल्युमहरू / र स्व्यापको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसले केही स्थान प्रयोग नगरी छोड्नुको मतलब बनाउँदछ ताकि तपाईं पछि अवस्थित तार्किक खण्डहरू विस्तार गर्न वा नयाँ सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
एक पटक माथिका सबै परिभाषित गरीएको छ। प्रेस गर्नुहोस्हो'को लागि अनुमति माग्दा डिस्कमा परिवर्तन लेख्नुहोस्.
अब नयाँ विभाजनहरू सिर्जना र ढाँचामा हुनु पर्छ।
तपाइँ बेस प्रणाली स्थापना गरेर सुरू गर्नुहुनेछ। यसले केहि मिनेट लिन सक्दछ।
स्थापना प्रक्रियाको क्रममा यो निम्न जस्तो देखिन्छ। HTTP प्रोक्सी लाइन खाली छोड्नुहोस् जबसम्म तपाईंaप्रयोग गर्नुहुन्न प्रोक्सी सर्भर इन्टरनेट कनेक्ट गर्न को लागी.
स्वचालित अपडेटहरू सक्षम गर्न हामी छनौट गर्नेछौं, सुरक्षा अपडेट स्वत: स्थापना गर्नुहोस्। अवश्य पनि, यो विकल्प प्रत्येकलाई चाहिनेमा निर्भर गर्दछ।
मैले यहाँ मात्र चयन गरेको वस्तुहरू OpenSSH सर्भर र साम्बा हुन्। ती मध्ये कुनै पनि अनिवार्य छैन।
स्थापना जारी छ:
GRUB स्थापना गर्नुहोस्
छान्नुहोस् 'हो'जब स्थापनाले मास्टर बुट रेकर्डमा GRUB बुट लोडर स्थापना गर्नुहोस् सोध्छ? हामी उबुन्टु स्थापना समाप्त नभएसम्म जारी राख्छौं।
आधार प्रणाली को स्थापना अब पूरा भयो।
अहिले हामी शेलमा लग इन गर्दछौं (वा दूरस्थ एसएसएच द्वारा) प्रयोगकर्तानामको साथ जुन हामीले स्थापनाको बखत सिर्जना गरेका छौं। यससँग हामी उबन्टु सर्भर १.18.04.०XNUMX LTS को न्यूनतम स्थापनाको समापन गर्छौं। अब यो केवल प्रत्येकलाई आवश्यक अनुसार यसलाई राम्रो-ट्यून गर्न बाँकी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबुन्टु सर्भर १.18.04.०XNUMX LTS न्यूनतम, आधारभूत स्थापना
शुभ प्रभात, मैले १ is.०18.04 Lts सर्वरको दुई iso संस्करणहरू, संस्करण .० र हालको संस्करण .0 डाउनलोड गरें र मैले यसको sha1sum समीक्षा गरें र उनीहरूले मलाई भेट्छन्। तर ती चरणहरू जुन तपाईंले देखाउनुहुन्छ १.1.०16.04 एलटीएस सर्भरका लागि हो किनकि यसले केवल आधारभूत फाइल सर्भर स्थापना गर्दछ, यसले तपाईंलाई अनुमति दिँदैन, १.16.04.०16.06 जस्तै, तपाईं स्थापना छनौट गर्न सक्नुहुनेछ: DNS, LAMP, मेल, प्रिन्ट, साम्बा, खुला SSH र Virtualization। यसले तपाईंलाई सर्वरको विकल्प मात्र दिन्छ, र अन्य दुई, (क्लाउड) जुन डाटाबेसको लागि हो। अब मलाई उबन्टु स्रोतहरू भन्दा बाहिर थाहा छैन जुन तपाईंले देखाउनु भएको जस्तो एक iso छ, जब सम्म तपाईं यो प्रदर्शनको साथ १mo.०XNUMX LTS बाट डेमो मोडमा गर्नुहुन्न। अब यदि तपाईंसँग आईएसओ छ भने, कृपया मलाई यसलाई डाउनलोड गर्न लिंक दिनुहोस्। अभिवादन र राम्रो काम।
जेसीलाई जवाफ दिनुहोस्
Damien Amoedo भन्यो
नमस्कार लेखमा देखाइएका चरणहरू उबुन्टु सर्भर १.18.04.०XNUMX रिलीजको साथ गरिएको थियो। लि in्क जुन लेखमा देखा पर्दछ अहिले तल छ, तर आईएसओ मैले लेख बनाउन प्रयोग गर्थे यहाँ। अहिले उनीहरूले यसलाई "पुरानो रिलीज" को रूपमा क्याटालो गरे।
आशा छ कि तपाइँ आईएसओ संग समस्या छ हल गर्नुहोस्। Salu2।
Damian Amoedo लाई जवाफ दिनुहोस्
र पीपीए प्रबन्धक, सजिलैसँग थप्नुहोस्, हटाउनुहोस् वा उबन्टुमा पीपीए सफा गर्नुहोस्
उबन्टुमा छविहरू सहित पिडिएफ कसरी सिर्जना गर्ने